Ny Teny fahasivy: Aza mety ho vavolombelona mandainga
"Aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao." Eksodosy 20:16
"Aza mandehandeha manaratsy eo amin’ny firenenao." Levitikosy 19:16
"Ny mahafaty sy ny mahavelona samy hain’ny lela." Ohabolana 18:21
Maro amintsika angamba no mbola tsy nanao vavolombelona mandainga tany amin’ny tribonaly. Fa amin’ny heviny itarina, io didy io dia mahakasika ihany koa ny olona manamaivana ny fanekena nataony, na mivadika amin’izany. Ary izy io koa dia manondro «ny fanendrikendrehana, ny fifosana, ny lainga, ny fanitarana iniana atao, ny famboamboarana ny marina. Mety manao vavolombelona mandainga isika, rehefa mampiely fanaratsiana na mihaino izany, rehefa mivazivazy hanesoana ny hafa, rehefa mahatonga fiheveran-diso, rehefa tsy manitsy fanambarana tsy marina… na amin’ny fitenenana, na amin’ny fanginana» (John Stott).
Ny fijoroana ho vavolombelona mandainga sy fanendrikendrehana dia tsy vitan’ny hoe mitondra fahavoazana ho an’ny hafa fotsiny, fa mahafa-boninahitra an’Andriamanitra ihany koa. Halan’Ilay Andriamanitra fahamarinana ny lainga: “Halan’i Jehovah … ny lela fandainga” (Ohabolana 6:16,17). Hoy i Davida tamin’Andriamaniny: “Fahamarinana ao am-po no sitrakao” (Salamo 51:6). Ary hoy ny apostoly Paoly: “Ny fitiavana ... tsy mifaly amin’ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin’ny fahamarinana kosa” (1 Korintiana 13:4, 6).
Ahoana no handrosoana mba hialana amin’izany? Rehefa tonga saina fa “avy amin’ny haben’ny ao am-po no itenenan’ny vava” (Matio 12:34), ary tonga saina fa tsy miova ny fontsika raha tsy lasan’i Jesosy. Raha tsy mijery afa-tsy ny tenantsika isika, dia hanolana ny marina, hahazoana tombontsoa. Fa raha Kristy kosa no Tompon’ny fiainantsika, dia honina ao amintsika ny fahamarinany; ary ho marina kokoa sy ho feno fitiavana ny tenintsika.